भन तिम्रो लागि कसले व्रत बस्ने गर्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
भन तिम्रो लागि कसले व्रत बस्ने गर्छ ?
श्रीमतीः म केही वर्षदेखि तीजको व्रत बसेकी छैन । फेरि पनि तपाई स्वस्थ्य नै देख्छु ।
श्रीमानः किन, के भयो र ? म आफ्नो स्वास्थ्यको आफैं ख्याल गर्छु आफ्नो नियमअनुसार चल्छु ।
श्रीमतीः मलाई मुर्ख नबनाउ, नढाँटी भन त्यो कुन राक्षस महिला हो, जो तिम्रो लागि तीजमा ब्रत बस्छे ?
याे पनि पढ्नुस प्रेमिका र प्रेमीबीच यो रमाइलो चु्ट्किला
ट्याग्स: funny jok